Macallinka Kooxda Chelsea ee Thomas Tuchel oo ku guuleystay abaal-marinta Tababaraha sanadka Jarmalka… (Yuu ku garaacay?) – Gool FM
(London) 25 Luulyo 2021. Thomas Tuchel ayaa ku guuleystay abaal-marinta tababaraha sanadka Jarmalka ee Germany’s Manager of the Year sida la xaqiijiyey.
Thomas Tuchel oo waqti badan aan haynin shaqada Kooxda Chelsea ayaa durba ku guuleystay abaal-marinta tababaraha sanadka ee Jarmalka ee Germany Manager of the Year award oo uu bixiyo Wargeyska Kicker.
Tuchel oo helay 129 cod, waxa uu abaal-marintan ku garaacay ku guuleystihii abaal-marintan ee sanadkii hore Macallin Hansi Flick oo helay 118 cod.
Waxaana Macallinka Chelsea ee Tuchel uu 11 cod kaga qaaday Macallinka Bayern Munich sanadkii hore ee Hansi Flick.
Tababarihii hore ee Kooxda Bayern Munich ayaa kaalinta labaad galay waxaana uu uruursaday 118 cod, halka kaalinta saddexaad uu ka soo muuqday Tababaraha Kooxda Borussia Dortmund ee Edin Terzic oo isna helay 75 cod.
Haddaba halkaan hoose ka eeg sida Tababareyaasha Jarmalka ah ay codadka u kala heleen:-
Thomas Tuchel (FC Chelsea) – 129
Hansi Flick (FC Bayern Munich) – 118
Edin Terzic (Borussia Dortmund) – 75
Bo Svensson (1. FSV Mainz 05) – 74
Urs Fischer (1 FC Union Berlin) – 54
Christian Streich (SC Freiburg) – 23
Stefan Kuntz (U-21 national team) – 15
Oliver Glasner (VfL Wolfsburg) – 14
Stefan Leitl (SpVgg Greuther Fürth) – 7 / Julian Nagelsmann (RB Leipzig) – 7 / Thomas Reis (VfL Bochum) – 7
Ole Werner (Holstein Kiel) – 6
Friedhelm Funkel (1. FC Cologne) – 4
Pal Dardai (Hertha BSC) – 3 / Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) – 3 / Jürgen Klopp (Liverpool FC) – 3 / Michael Köllner (TSV 1860 Munich) – 3 / Pellegrino Matarazzo (VfB Stuttgart) – 3
Stephan Lerch (VfL Wolfsburg Women) – 2